Nkpuru osisi Artichoke - Otu esi eme nri ihe site na nzo! | Nutri Nri
Na atịchok nri ọ bụ otu n'ime ihe ndị kasị ewu ewu na ama Na obodo anyi. Kwuru arọ ọnwụ atụmatụ na dị ka aha ya na-egosi, dabeere na ọtụtụ njirimara nke atịchok iji mee ka onye a na-ekwu ihe funahụrụ ya usoro kilo na obere oge enwere ike.
Onye ama ama nke atịchok nwere ọtụtụ ndị na-asọ oyi na ọtụtụ ndị na-akwado ya na-emekarị ụdị nri a ọrụ ebube. Ọzọ, aga m agwa gị n'ụzọ zuru ezu karị Kedu ihe nri a nwere, ụfọdụ n'ime ya uru na ihe ize ndụ ya mere na n'ụzọ dị otú a ị bụ nnọọ doro anya, ma ọ bụrụ na ọ bụ ọnụ ahịa ya ma ọ bụ ghara ịnọgide na-kwuru slimming usoro iwepu iberibe kilogram ndị ọzọ dị na ọnụ ọgụgụ gị.
1 Slimming Njirimara nke atịchok
2 Kedu nri atịchok?
3 Kedu ihe ị nwere ike iri na nri atịchok siri ike?
Slimming Njirimara nke atịchok
Atịchok bụ nri nwere usoro nke zuru okè Njirimara iji belata ibu na felata. Ya mere, ọ dị mkpa ijikọ ngwaahịa a na ụdị nri ndị ọzọ. dị nnọọ ka na-edozi ma si otú ahụ nweta ụdị nri ahụike na nguzozi zuru okè maka ahụ. Isi slimming Njirimara nke atịchok bụ ndị na-esonụ:
Ọ bụ ihe magburu onwe eriri isi ya mere ọ ga-eji nyere gị aka na-enwe afọ ojuju ngwa ngwa ma si otú a zere iri calorie ndị ọzọ. Na mgbakwunye na nke a, atịchok ahụ zuru oke iji dozie ezigbo eriri afọ ma zere nsogbu na mgbaze nri.
Ọ bụ magburu onwe mamịrị ya mere, ọ na - enyere ahụ aka iwepu ọtụtụ nsị na adịghị ọcha ma gbochie njide mmiri.
O bu nri ya na ya ọtụtụ ihe na-edozi ahụ na kalori dị ala nke mere na ọ dị mma ifelata n'ụzọ dị mma.
Na mpempe, atịchok bụ nri zuru oke ịgụnye na nri nke ụbọchị na ụbọchị ma nweta iri otu ahụ ike na abụba-free ụzọ.
Kedu nri atịchok?
Onye ama ama na nri atịchok nri banyere 3 ụbọchị kacha na n'ime obere oge a ị ga-efu efu ruru kilogram 4 nke ibu. Mgbe oge ahụ gasịrị kpam kpam inadvisable gaa n'ihu na ụdị nri a kemgbe enweghi ezigbo nri n'ime ya ọ nwere ike ibute nnukwu nsogbu ahụike. Nri a dabere na iri atịchok n'oge nri ehihie na nri abalị na ị drinkingụ ọtụtụ mmiri iji nweta sachapụ ihe dum organism nke toxins na adịghị ọcha. N'ime ụbọchị 3 nke nri a dịruru, ị nwekwara ike were ụdị nri ọzọ dị ka ngwaahịa mmiri ara ehi, mkpụrụ osisi, akwụkwọ nri, toki na osikapa agba aja aja.
Site n'ịgba ume akwa eriri oriri, ị ga-efunahụ ibu ụbọchị ole na ole. N'agbanyeghị nke a, ọ bụrụ na ị gụchaa nri na ị naghị agbanwe àgwà gị n'oge nri, enwere ike ịta ahụhụ na-atụ ụjọ rebound mmetụta nke nri a na-akpọ ọrụ ebube wee gbakee ọtụtụ kilo nke ndị ị funahụrụ na nri artichoke a ma ama. Nke a bụ ihe atụ nke ihe ọ nwere ike ịbụ menu kwa ụbọchị nke ụdị nri a.
Na nri ụtụtụ ị nwere ike ịnwe iko kọfị na mmiri ara ehi, tii ma ọ bụ ihe ọ juiceụ juiceụ mkpụrụ osisi yana iberi achịcha na chiiz ma ọ bụ 3 kuki ọka dum. Ọkara ụtụtụ a yogọt skim. N’oge nri atịchok na osikapa agba aja aja na otu mkpụrụ osisi. Maka nri a na-eme yogọt ma ọ bụ kọfị na mmiri ara ehi. Maka nri abalị atịchok atọ emere tinyere iberibe achicha achicha dum na obere cheese nke skim skim.
Kedu ihe ị nwere ike iri na nri atịchok siri ike?
Na atịchok nri ọ dị mfe ịgbaso dị ka bụ tumadi dabeere n'iri nri buru ibu n'oge a ụbọchị 3 na nri na-adịgide. N'ụzọ dị otú a, ị nwere ike ịmalite ụbọchị na ahụike ihe ọ juiceụ juiceụ ihe oriri nke akụrụngwa bụ Atịchok. N'oge nri ehihie ị nwere ike ịme otu efere osikapa agba aja aja ma tinye otu atịchok. Ka i si hụ, isi ihe na ụdị nri a mejuputara ihe ndi ozo dika otutu oge na nri gị kwa ụbọchị.
Ọ bụrụ na ị chọrọ ka a ike atịchok nri nke ị ga-efufu kilo na-etinyeghị ahụike gị n'ihe egwu, ịkwesịrị itinye nnukwu nri na-edozi ahụ dịka mkpụrụ osisi dị elu, akwụkwọ nri na protein. Na mgbakwunye na nke a, ị nwere ike itinye onyinye ma ọ bụ mkpo were ụbọchị ole na ole n’izu. N'ụzọ dị otú a, ị nwere ike ogologo nri nke atịchok ruo ọtụtụ ụbọchị na ị gaghị etinye ahụ ike gị n'ihe egwu ebe ọ bụ maka ihe gbasara ya nri na-edozi ahụ ma na-edozi ahụ. Ọzọ m ga-egosi gị ihe nlere nke menu na i nwere ike ime ka atịchok dị ka isi ngwaahịa.
N'oge nri ụtụtụ ị nwere ike iri ihe ọ juiceụ juiceụ ihe oriri emere site na atishoki na inine na akwukwo nri ndi ozo. N’etiti ụtụtụ ị nwere ike were otu mkpụrụ osisi. N'oge nri ehihie, ị nwere ike ịme ara ọkụkọ eghere eghe a aghara-ighe nke atịchok. Maka nri a na-eme yogọt. Maka nri abalị nri salad dị iche iche omelochi atịchok.
Na nkenke, nri atịchok n'echiche siri ike ezigbo ihe ize ndụ na ihe egwu maka ahu ike. A na-ahụta ka nri hypocaloric ya mere ka ụbọchị na-aga, ị ga-enwe mmetụta na-esikwu ike na ike na-enweghị ume ọ bụla. Enweghị ọtụtụ protein na abụba ndị dị mkpa maka ahụ ọ na-ekwekọghị nnọọ. N'aka nke ọzọ na dịka ị hụrụ ahịrị ole na ole n'elu, ọ ga-ekwe omume ịrụ ụdị ahụike ahụike artichoke na nke ị ga-enwe ike ida usoro nke kilo. Only ga - etinye aka ihe ndị ọzọ dị mkpa maka nri dị otú ahụ ma gbasoo ụdị nri dị mma.
Iji mechaa, aga m etinye gị n'okpuru ihe nkọwa video nke mere na you gh otara ya ihe o mejuputara nri achicha ama ama.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Nutri Nri » Ahụike » Atịchok nri
Ihe oriri nke na-ebute nsị nke afọ
Adịghị Oge Mgbu - Oge Nwee Ọgwụ nke Bright White Light Therapy